Maitiro ekudzikisira kubva iOS 11 kuenda iOS 10.3.3 | IPhone nhau
Sezvo ini ndakakuzivisa iwe mune yangu yapfuura chinyorwa, iOS 11 inowanikwa mu10,01% yemidziyo inoenderana maawa makumi maviri mushure mekutanga kwayo, chimiro chakadonha zvakanyanya zvichienzaniswa nekuburitswa kweshanduro dzapfuura dzeIOS. Kana iwe wakagadziridza usina kumirira kuti uone maitiro ekuita evamwe vashandisi uye iwe ukaona kuti chako kifaa hachishande sezvachinofanira, ungangoda kudzokera kuIOS 24 Apple isati yamira kusaina uye kumirira kuti itange. iyo yekutanga yekuvandudza yeIOS 10.3.3, mune tariro yekuti ichagadzirisa matambudziko anowanikwa nemidziyo yedu.
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuziva kuti kana isu tisina kuita yakachena kuisirwa, ndiko kuti, kubva pakutanga, kubvisa zvese zvirimo mu iPhone yedu, marara ese atakange taunganidza pane yedu kifaa anogona kukanganisa mashandiro awo, saka Tisati tadzokera kumashure kune yapfuura vhezheni yeIOS iyo Apple inoramba ichisaina, isu tinofanirwa kutora chimiro icho uye nekuyedza. Asi kana pasina nzira yekuvandudza mashandiro, isu tinokuratidza maitiro atinogona kudzokera kuIOS 10.3.3
Maitiro ekudzokera kuIOS 10.3.3 kubva kuIOS 11
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kuenda kunewebhu ipsw.me y dhawunirodha iyo iOS vhezheni 10.3.3 inoenderana nechinhu chatiri kuda kuiisa. Iyi faira ichave iine ipsw yekuwedzera uye ichave ingori pamusoro pe2 GB, zvinoenderana nechinangwa chinhu.
Ipapo tinoenda kuTunes uye tinobatanidza mudziyo wedu kuMac kana PC.
Padanho rinotevera isu tinofanirwa kuenda kune iyo icon inomiririra chishandiso kuti isu takabatana, icon iri mukati mesarudzo dzakapihwa neTunes.
Isu tinoenda kurudyi rwechidzitiro uye tinya Tsvaga kugadzirisa neinotevera kiyi musanganiswa:
Kana iri Mac: Tinofanira kudzvanya iyo sarudzo nekiyi yeOption yakadzvanywa.
Kana tichiita izvi kubva paWindows PC, tinofanirwa kubaya pane yekuchinja kiyi (Shift) kana tichidzvanya pa Tarisa kuti uwane mhinduro.
Tevere hwindo rinozovhura kwatinofanira sarudza ipsw faira izvo zvatave kungotora kuti titange kudzoreredza maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 11 kuenda kuIOS 10.3.3
ignacio miranda akadaro
damn zuva randakagadzirisa IOS 11, yangu iphone 6 yainonoka uye ndatoita zvese
Pindura ku ignacio miranda
damn zuva randakagadziridza kuIOS11, yangu iphone 6 yainonoka, nhamo chaiyo iyo OS nyowani.
Ndine iPhone yangu ine IOS 11 kubvira yekutanga beta uye ini handina kunonoka, taura kuti ini ndinoita yekumisikidza yakachena panguva iyo yekupedzisira vhezheni painobuda, Yakachena kuisirwa ndinoreva kuidzosera uye kwete kurodha backup backup
Ini ndinowanzo ita kudzoreredza yega yega vhezheni vhezheni yeIOS, asi ikozvino Apple yabvisa iTunes AppStore uye nesarudzo yekuyananisa iyo kudzoreredza uko kunosanganisira kurodha pasi makumi mashanu negumi kubva pachigadzirwa mumaapps andinawo.
Zvinotaridza kuti havana kuverenga pane izvo. Ini ndinobvuma kuti ini ndaishandisa iTunes kunyanya kuteedzera zvakadzokororwa kunyorera ku iPhone ndisina kuenda imwe neimwe muApp Store, asi zvinoita sekunge haisi nzira inodiwa naApple.
Ehe hongu, zvinonyadzisa. Kune vashandisi vakaita seni vanowanzoita kudzoreredzwa kweimwe neimwe vhezheni huru yeIOS uye isu tine maapplication mazhinji, maitiro acho haana kugadzikana izvozvi (kunyanya kana uine iPad kana zvimwe zvishandiso zveIOS kuwedzera kune yako iPhone)
Mubvunzo, hausi kuva nezvinetso nekushandisa kwemimhanzi? Ndakagadziridza maviri iPhone 11s Plus kuIOS 6 uye hapana kana imwe yadzo inoshanda iyo Music app, pandinoivhura inoramba yakavhurika kwemasekonzi mashoma uye ndokuvhara. Ini ndatoedza zvese uye hapana nzira yekuzondishandira.
haindibvumidze ini pandinoisa chikamu software iyo inondiudza kuti haina kuenderana
Kana ikakuudza izvozvo, iwe unenge usina kutora iyo vhezheni inoenderana neyako modhi. Hakuna kumwe kururamiswa.
Ini ndaona neIOS 11 kuti pandinoremadza iyo bluethoo uye iyo Wifi kubva kunzvimbo yekudzora, vanoramba vachishingairira muzvirongwa uye vanoshandisa yakawanda bhatiri. IOS 11 inonetsa chaizvo.
Ivo vachiri vanoshanda kudzivirira chero imwe kifaa kubva kubatanidza uye kuitira kuti kana iwe uri kushandisa iyo Apple Watch kana iyo AirPods iwe usarasikirwe kubatana unogona kuramba uchizvishandisa, harisi dambudziko reshanduro, ndizvo izvo Apple inoda.
Vakomana chenjerai nekuita izvi, uye ini ndiri kuyedza kudzika ku ios 10 uye kubudikidza nemaitiro acho, pandakapedza zvakandipa kukanganisa, iyo iphone yaisakwanisa kuvandudzwa uye skrini yacho yakasviba ndaitofanira kuitangisa mumamiriro ekudzosa , nerombo rakanaka ndine backup ndakarasa ruzivo rwangu rwese HANDIKURUDZE KUZVIITIRA
Pindura kuna Said
Mhoro shamwari dzedare, ini ndichangobva kurodha pasi kune ios 10.3.3, zvabuda zvakakwana. Ndine iPhone 7 uye ini ndakaburitsa iyo GSM vhezheni, nekuti neyepasi rose iyo yakakanda chikanganiso. Ndakaedza ios 11 uye mashandiro matsva airatidzika kunge akanaka kwazvo, asi chii chakaita kuti ndisiye kugara kwaive kushandisa bhatiri, mumaonero angu kwakawanda kushandiswa. Ndinovimba kuti mune nyowani nyowani ichagadzirisa nyaya yekukwirira bhatiri kunwa. Parizvino ndiri kugara neIOS 10.3.3, Kwaziso kubva kuCHILE .. !! KUSIMBIRA KUVANAKOMANA VEMEXICAN VARI KUTAMBUDZIKA MUDZIMAI IYI… KUSIMBISA KWAKANAKA !!!!
Mhoro!! Ndine dambudziko: ndatevera nhanho dzese nemazvo, asi kana iri kutogadziridza, ndinowana kuti pane kukanganisa kusingazivikanwe (kukanganisa 26) uye kuti haigone kuenderera. Saka nhare inogara neyakagadziridzwa bhawa uye haina kumbofambira mberi ... Ndokumbirawo mubatsire, ndinoda kuigadzirisa uye handidi iOS 11 zvachose ... ndine iphone 6. Ndatenda !!
Mhoro! Ini ndangodzikisira yangu iPhone 5s, ine iyo GSM vhezheni, uye pakupedzisira yakaratidza kukanganisa. Ini ndaive neTunes yakagadziridzwa, uye iyo vhezheni inoenderana neyangu nhare mbozha, saka handizive kuti chii chakaitika ... chero mazano? Ini ndinofanira kukurumidza kudzokera kuIOS 10, nekuti iOS 11 yakandishandira zvisirizvo munzira dzese.
Andres Narvaez akadaro
Iko kukanganisa ndekwekuti iwe wakaipa kuti ivandudze uye nekudaro inokupa iwe kukanganisa, iwe unofanirwa kuipa kuti idzore pamwe nekiyi musanganiswa, tsvaga iyo faira uye ndizvozvo
Pindura kuna Andrés Narváez
Wanga uchitaura chokwadi, ndatenda zvikuru! Ini ndakapa mukuvandudza kunoteedzera rairo, ndisingazive kuti chaive chii chekudzorera. Yangu nhare mbozha ine yekudzikisa yakagadzirira. Ingo Chenjera kuti haina kunditendera kuti ndiise backup yangu kungave kubva kuTunes kana iCloud nekuti yangu yakaiswa vhezheni (10.0.3) yaive yechikuru pane yazvino (11), saka, ndakarasa zvese.
Chinhu chimwe chete icho chakaitika kumunhu akanyora pamusoro chakaitikawo kwandiri, iyo yekuvandudza bar pane yangu cell cell yakagara kusvika kumagumo uye haibve ipapo. Ndinoonga rubatsiro.
William Barajas akadaro
Kune avo vane Iphone 6S, kudzikisira kubva kuIOS 11 kusvika 10.3.3 kubva ku "Dzosera" bhatani rinotevera rakabatana kiyi musanganiswa, nekuti kana vachizviita kubva ku "Tsvaga Kwekuvandudza", rinokanda "Chisingazivikanwe kukanganisa 26". Kwaziso
Pindura kuna William Barajas
Ini ndaodhaunirodha faira kubva ios 10.3.3, batanidza iphone kune itunes uye ndokuisa kugadzirisa pamwe nekiyi nhevedzano, sarudza iyo faira randakaburitsa uye rikadzvanywa nekuvandudzwa sezviri pachena pasina matambudziko (kukanganisa hakuna kumboonekwa mune yese maitiro) uye kune iyo yekupedzisira pakapedza kurodha bhaa, chikwangwani chakaonekwa paitunes chakanzi "iphone yakagadziridzwa zvinobudirira uye iri kutangazve." usazvidimbure »uye saka ndakamirira kwenguva yakareba asi iyo iPhone yakagara nekusingaperi pachiratidziro cheapuro! uye ikozvino ini handizive maitiro ekuti iite kuti ibude pachena! ndokumbirawo ubatsire! Ndatenda!
Pindura kuna Lu
(Ndinojekesa iri iphone 7)
Hauna kutevera matanho nemazvo. Iye zvino unofanirwa kudzosera foni muDFU modhi uye ita nhanho dzese.
Ndekupi kwandakatadza? Teerera kumatanho ndosaka ndichiona zvichishamisa. Zvino sezviri pachena
ini fekitori ndakaidzorera, uye ndiri kudzoreredza backup kwazviri .. zvirinani yakadzokera kuIos 10.3.3 zvinova ndizvo zvandaida ..
Mhoro Lu ndinoda rubatsiro rwako ndapota, ini ndaisakwanisa
Izvo ZVINOKOSHA kusimbisa kuti kana * .IPSW yakaiswa isina kuita backup chaiyo yemidziyo ruzivo, yakati ruzivo rucharasika, maererano nemaitiro acho, kana yaiswa, ichakumbira kopi yekuchengetedza uye izvi ndiyo nzira iyo ruzivo rwedu ruchachengetedzeka.
Mhoroi ndakazviita ne iphone 6s uye zvakashanda zvakakwana
Usazviite sekutsanangurwa kwedzidziso iyi, unofanirwa kutanga waita backup ne iTunes kana icloud uyezve nekiyi yekuchinja pc tinobaya pakudzorera tichisarudza iyo faira ratakatora kare tobva tadzorera kopi, kwaziso!
ndine iphone 6 ine ios 11.0.1 inogona kudzokera ku10.3.3? Batsirai ndatenda
Chero bedzi Apple ichisaina hongu
Mhoroi, unogona here jailbreak 10.3.3? Izvo ndeye ipad ine vhezheni 9 yakaiswa. Ndatenda
Lore pedraza akadaro
Ndakagadzirisa yangu iPhone 6 ine vhezheni 11.0.0 ipapo 11.0.1 uye ikozvino ne11.0.2 uye nharembozha inononoka, kunyora muWPP, fbk kana kunyora kuchinonoka ... Ini ndinomutsa iyo wifi uye bluethoot ... ndapota ku iyo yemanzanita kana crest vachaburitsa yakaderedzwa update? Ivo vanokuvadza michina yapfuura kune yekupedzisira vhezheni mune ino kesi iyo 8
Pindura kuna Lore pedraza
Ini ndakadzora iOS 10.3.3 yemuenzaniso wangu uye iTunes painopedza inoti iko kukanganisa kwakaitika uye mukufunga pane peji rekurodha reIOS 10.3.3 rinoti harishande kuTunes. Saka ndinoisa sei yangu iPhone kumashure neayo gumi?
Izvo hazvina kushanda 🙁 ini ndinowana inotevera meseji:
Kukanganisa 3194, Kukanganisa 17, kana "Ichi chishandiso hachikodzeri iyo yakakumbirwa kuvaka"
Pane mumwe munhu atoderedzwa kubva ios 11 kusvika 10?
Nezuro ndakazviedza uye ini ndaive nekanganiso ini yandaifanira kudzorera nekuti yaive yakaturikwa, haina kumbobvira yafambira mberi uye yaive muma6. Sezvineiwo hazvichashande
Kwidziridzo: Sezvambotaurwa pamusoro apa, zviri RESTORE, KWETE UPDATE. Kwayedzwa pa iPhone 6S yakadzikiswa kubva pa11.0.2 kusvika 10.3.3
Nhasi dhawunorodha vhezheni 10.3.3 ye iphone 6 uye pawebhu iyi komendi iri mufaira rekurodha
Iyi firmware haina kusainwa. Izvi zvinoreva kuti haugone kudzorera muTunes. »
Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika kune mumwe munhu uye chakakwanisa kudzorera nenzira imwecheteyo.
Yangu iphone 5s haigone kuvhurwa neWi-Fi, data renhare kana neiyo iTunes chirongwa, mumwe munhu anoziva zvandingaite, ini ndinoigadziridza kune ios 11.0 uye kusvika zvino handikwanise kuishandisa.
Apa wega usingazive ndiwe. Kana ikakupa kukanganisa kusingazivikanwe, imhaka yekuti iwe waita chimwe chinhu chisina kunaka.
Ngatione kana tichiverenga zvakanaka uye tigoita zvinhu zvinoratidzwa muchinyorwa uye isu hatishoropodzi kana tisingazive kuzviita.
Mhoro! Ndiri kuyedza kudzikisira iyo iPhone 6 uye inoratidza kukanganisa 3194. Ndakaita kuteedzana kwakakosha neShift + Kudzorera uye ndikasarudza iyo faira kubva pa10.3.3, inomhanya bhawa iri kuburitsa ruzivo uyezve wozoisa iyo uye iko iko iko kukanganisa chidzitiro.
Ndiri kurwara neyakawandisa bhatiri yekushandisa ... zvishoma nezvishoma ini ndakatojaira. Ndichaedza neiyo nyowani kubva pa11 yauri kunditumira kuti ndione kuti zviri sei, asi chii chandingaite kana ndichida kudzokera ku10.3.3?
Mhoroi, ndatevera nhanho dzekudzikisira paIphone 5S uye kana pasuru yacho yaburitswa kuburikidza neTunes, inondikandira iko kukanganisa kumwe chete: 3194. Chii chandingave ndichitadza? Ini ndatoisa iye pakudzorera, asi zvakadaro hapana chakaitika.
Daniel Carrasco akadaro
Mhoro shamwari .. Zvichiri kuita here kudzokera kuIos 10.3.3? , Ini ndinowana kurodha pasi iro vhezheni uye zvinokwanisika kurodha pasi, zvisinei zvinoita sekunge risingachakwanise kudzoserwa nekuti apuro yakadzikisira shanduro dzekare dzeios… Ini ndinoda rubatsiro! Yangu iphone 5S inotyisa, inononoka uye bhatiri rinogara zvishoma. Ndokumbirawo mubatsire ... chero mupiro uchaita. Kwaziwai!
Pindura kuna Daniel Carrasco
Iphone Mushandisi akadaro
Nhasi ndaedza uye zvinosuwisa kuti hazvishande, ndinowana iko kukanganisa 3194. Zviripachena Apple yatoremadza mukana uyu sezvo izvo zvinotarisirwa nekambani ndezvekuti isu tese tinotenga IPhone nyowani. 🙁
Pindura kune Iphone Mushandisi
Mhoroi vakomana, ini ndawana mhinduro, ini ndinoshandura kuenda kuApple sezvo chinhu chega chavanowana neichi kutisiira isu zvisirizvo zviteshi uye kutimanikidza kutenga imwe, ivo vanga vatondigutsa asi vatove neshanduko.
carl 77 akadaro
Ndine Iphone 6 plus uye ndinoda kudzokera kuIOS 10.3.3 asi peji rekurodha rinoti: Iyi firmware haina kusainwa. Izvi zvinoreva kuti haugone kuidzosera pairi muTunes.
Chii chaunokurudzira, ini ndinopfuurira neichi chiitiko kana kwete?
Pindura kuna carl 77
Mhoroi, ndine iphone 6 inogadziridza kuios 11 asi inononoka. Mhinduro yangu yaive yekuchinja bhatiri kune nyowani ine yakakwira bhatiri muzana uye yakagadziriswa nyaya. Iyo processor yakatovhurwa uye ios11 isina matambudziko.
Luis Miguel Rozo F. akadaro
Ndine 6 Gb IPHONE 64 uye yakagadziridzwa chete kungoita 11.3.1 uye yakatanga kukoromoka uye ndaifanira kudzima iyo WIFi pane imwe nguva kuti ndiivhure, ipapo ndakatanga kunyora chete kuvhura ese maapplication uye kunyora chete makiyi, ndakavhura internet ndiko kuti, NDAKANGA NDAKANAKA!. Ini ndatoitazve nekuti touch screen haishande. Kubata kwakajairika kunoshanda zvakare uye kubata, bhatani uye zvigunwe zveminwe zvakakiiwa zvakare kana zvikashanda. Ndiri kuenda kurodhaunura kumavhezheni maviri kumashure IOS 11.2.6 yaFeb 19, 2018. Ini ndichakuudza kana yagadziriswa
Pindura Luis Miguel Rozo F.
3 mitambo uye maapps emahara kana ari kutengeswa kwenguva shoma